Ulungile, uMlilo, iinjongo | Martech Zone
NgoMvulo, Oktobha 25, 2010 NgoLwesithathu, Oktobha 29, 2014 Douglas Karr
Olu rhatya ibilusuku oluhle alichithe nabanye abathengisi abaziwayo, ukuthengisa kunye neempawu zokuthengisa uphawu. Samenyelwa kwindawo yokutyela entle kakhulu kwigumbi labucala. Injongo yale ntlanganiso yayikukunceda ugxa wakhe owayefuna ukuthatha ishishini lakhe alibeke kwinqanaba elilandelayo… okanye amanqanaba ambalwa ngaphaya kwalapho akhoyo ngoku.
Kwakukho itoni yesivumelwano kwigumbi… qaphela ukuba yintoni le uyenzayo kwisivakalisi esinye, chonga iimpawu ezizahlulahlula, uphuhlise inkqubo yokuthengisa iinkonzo zakho ngokusekwe kwixabiso olizisayo, unxibelelane nenethiwekhi yakho ukuze uchonge amathemba aphezulu okuthengisa kunye nokuphuhlisa uphawu oluquka oko uzisa kwitafile.
Khange ndiphikisane noku… kodwa ngumsebenzi omhle kakhulu, andithi? Ungasebenza iminyaka kwezi zinto… kwaye ugqibe ubuyele kwibhodi yokuzoba kuba khange uphumelele.
Ngentlonipho yonke kubalingane bam, ndihlala ndithandabuza xa iingcali zibonelela ngolu hlobo lwesicwangciso sobuchule kunye neengcebiso. Ndisebenze ngokunyanisekileyo kumasebe ajikelezayo kwintengiso ngaphezulu kweminyaka engamashumi amabini ngoku kwaye andicingi ngesicwangciso esinye sentengiso esisebenzayo njengoko bekucwangcisiwe.
Kukho konke ukunyaniseka, ndicinga ukuba uninzi lwale ntetho lupoppycock.
Ayiyondlwana yonke ... Ndiyakholelwa ukuba ukucinga ngobuchule kubalulekile. Emva kwayo yonke loo nto, kuya kufuneka uyazi ukuba ulwalathiso oluphangaleleyo luphi na ngaphambi kokuba utsalale. Nangona kunjalo, kungcono ndicinge umntu kuqala umlilo emva koko ujonge endaweni yokusebenza iinyanga ukuseta umpu onokuthi okanye ungabethi i-bullseye kwaphela.
Ndihlala ndibona amashishini engaphumeleli ngaphambi kokuba bakhuphe. Banoloyiko lokusilela kangangokuba bakhubazekile kwaye ngekhe bathathe umngcipheko ofanelekileyo wokuqhubela phambili. Jonga ngeenxa zonke kuwe kumashishini aphumeleleyo. Ngaba baphumelele kuba baceba ngokungagungqiyo? Okanye bayaphumelela kuba bebeshesha kwaye bekwazi ukuhlengahlengisa isicwangciso sabo njengoko iimfuno zamathemba abo, abathengi babo kunye nomzi mveliso wabo kufuneka?
Zithini iimbono zakho? Amava?
tags: wayethandauhlalutyoumliloqhinga urhweboLungile
Iifom zoQhakamshelwano, iiBots, kunye ne-Spam engenazintloni
Oktobha 25, 2010 ngo-11: 03 PM
Ndicinga ukuba ulungile ubukhulu becala. Kubonakala kum ukuba kuxhomekeke kwinto oyenzayo kunye nokuzithemba kwakho ukuba kukho into ekufanele ukuyinyusa. Into endiyithethayo kukuba ngamanye amaxesha kunyanzelekile ukuba ufumane isicwangciso esisesikweni esine-direction kunye nenjongo. Inceda abantu abaqhuba isicwangciso ukuba bahlale ekhondweni. Nangona kunjalo, ngaphakathi kweso sicwangciso kuya kufuneka kwenziwe ngakumbi kunesicwangciso. Izicwangciso zokuqala zinokujikwa zijongise kwisithuba seentsuku. Oko kufuna utshintsho olukhawulezileyo.
Ukuthatha isifaniso sakho nzulu kancinci, cinga ukuba khange ujonge konke konke ngaphambi kokuba udubule. Ungayibetha ithagethi, kodwa ungaphoswa ngokupheleleyo, okanye ubethe umhlobo, okanye ngokwakho. Kungenxa yoko le nto ndicinga ukuba oku kuxhomekeke ekubeni uqiniseke kangakanani malunga noluvo okanye ishishini (lingakanani na ithagethi).
Ke ukuyizisa kunye - kule ndawo sikhuphisana kuyo sonke, kufuneka sijolise ngokukhawuleza kwi-AT ekujoliswe kuyo kunye nomlilo, emva koko siphinde sijolise kwaye siphinde siphinde sicime umlilo, emva koko siphinde sijolise kwaye siphinde sijike kwakhona. Okanye… yiza nompu.
Oktobha 25, 2010 ngo-11: 04 PM
Ndikunye nawe kule. Ukuvela kumbutho omkhulu kakhulu apho isantya silinganiswe ngeenyanga kunye nesiqingatha seminyaka kwaye "iqhinga + lokulifumana" ngokuchanekileyo yayiziko leminyaka eli-15 ndabona ukubaluleka kokukhawuleza njengoko siqala ukusebenzisa indlela entsha ekusebenzeni kweshishini lethu . Ngoku ukuthengisa ukuqhuba kwesiqalo esasikho, xa ndandiqala, kuncinci kuneqela lentengiso elalindisebenzisela inqaku lakho kubaluleke ngakumbi. Amava adibeneyo amalungu aphezulu eqela kufuneka onele ukukukhomba kwicala elifanelekileyo. Ukuba bukhali nokuba ngcono rhoqo kukusebenza ngokugqwesileyo… kubaluleke kakhulu kwaye ubukhulu becala kubethwa ngoyaba iseti yamaqela akhulayo.
Oktobha 25, 2010 ngo-11: 10 PM
Ndivuma ngokupheleleyo, Brian! Isimanga kukuba ndichitha ixesha lam elininzi ndifunda kwaye ndifunda iziphumo zabanye ukuze ndazi ukuba leliphi icala ekufanele ukuba lijolise kulo. Ndixhala nje ukuba iinkampani ezininzi azikaze zithathe inyathelo lokuqala. Abasileli kwangoko ngenxa yokuphambuka… kodwa ekugqibeleni bayasilela njengokuba abanye bedlula kubo.
Oktobha 25, 2010 ngo-11: 24 PM
Ewe ndiyavuma. Andibonanga intengiso embi kuqala kodwa ndihlala ndisiva amabali eenkampani ezindala zisokola ngokwenene kwimizamo yokuqala yentengiso. Abayifumani nje ngoko ke lonke ucwangciso lwehlabathi alubancedisi ukuba bafunde izifundo zokwenyani abazifunayo ukuze baphinde bajonge kwaye baphinde badubule kwaye abaphindi ngokukhawuleza ngokwaneleyo ukulungisa ingxaki.
Ngendlela, loo mzekeliso omkhulu. Isebenza kakuhle kule meko. Unyanisile malunga nokwazi nje ukuba ijolise phi kwaye ndiqinisekile ukuba unengqondo ebaluleke kakhulu kuloo nto. Abanye abantu abayenzi kodwa. Ngubani owaziyo ukuba ukucwangcisa kuyanceda, kodwa ndoda kukho abantu abathile abazidubulayo ngeenyawo ngentengiso yabo. (Kuye kwafuneka ndiyitsho, ilunge kakhulu)
Okt 26, 2010 ngexesha 12:30 AM
UDoug andinakuvumelana nawe ngakumbi. Kwinqanaba lokuba ndingubani: USOMashishini. Ukuya kuthi ga apho oosomashishini baya khona malunga nokujonga ikamva kwaye ndithathe nawaphi na amanyathelo ayimfuneko ukuya apho. Ndiyakholelwa kwizicwangciso. Ndiyakholelwa ekucwangciseni. Nangona kunjalo, mandivume ukuba andikaze ndenze "isicwangciso seshishini" sendabuko.
Kunyaka odlulileyo bendincokola nomnumzana. Andisalikhumbuli negama lakhe. Sadibana okokuqala kwintlanganiso yesidlo sakusasa esasihamba sobabini kwindawo yaseCastleton, eIndiana. Kwakungomnye wabo "ukuma-ngaphandle-kwindawo yokupaka-ngaphezulu-kweyure-emva-kwakho-nje-ukudibana-nencoko" kwaye ngandlela-thile safika kwisihloko sokwenza isicwangciso seshishini. Ndavuma kuye ukuba andikaze ndenze isicwangciso seshishini sendabuko. Wandibuza "Ngaba uceba nangaliphi na ixesha kungekudala ukuba uyokufumana inkxaso-mali ebhankini kwishishini lakho elincinci?" Ndaphendula ndathi, “Hayi.” Emva koko ungakhathazeki malunga nesicwangciso seshishini, utshilo. Ngokwenene, wandixelela "uMlilo kunye neenjongo." Undikhuthazile ukuba ndilandele umoya wam wokurhweba kwaye ndiphume ndiphumelele.
Kwaye ke uDoug yilento bendiyenza kule minyaka mithathu idlulileyo okoko ndaye ndasungula i-Cross Creative ngo-Okthobha ka-3. Ndonwabile ke ngoku kwinkampani yam nakwiminyaka emininzi yempumelelo kuthi sobabini njengoko sizama ukukhonza kunye neminqweno evuselelayo. Suku ngalunye! Lusuku oluhle lokuba ngusomashishini.
Okt 26, 2010 ngexesha 6:55 AM
Ndivuma ngokupheleleyo, uDoug. Uhlalutyo ukukhubazeka ayisiyiyo nje uphawu lweenkampani ezinkulu. Uninzi lwabanini bamashishini abancinci bayoyika intshukumo engalunganga nayo. Isenzo, kunye neemetriki zokuvavanya impumelelo, sisicwangciso esihle. I-Fortune iyabathanda isibindi.
Oktobha 26, 2010 ngo-1: 07 PM
Ndivuma noDoug, Ukuthamba lula ligama lomdlalo namhlanje. Ukucinga ngobuchule namhlanje kufuneka kubandakanye ukubanakho ukuziqhelanisa ngokukhawuleza kwindawo yentengiso eguqukayo.
Oktobha 26, 2010 ngo-3: 19 PM
Yiyo loo nto oosomashishini abaphumelele ngokwenene beqala amashishini… emva koko bathengise kubacwangcisi abathetha kakhulu nge "poppycock" ukuba bazenzele ngokwabo.